Ogaden News Agency (ONA) – Madaxii Hore ee FBI-da oo Lafilayo In uu Sir Trump Ka Dhan Ah Soo Bandhigo
Madaxii Hore ee FBI-da oo Lafilayo In uu Sir Trump Ka Dhan Ah Soo Bandhigo
Madaxii hore ee hay’ada Danbi Baadhista Maraykanka ee FBI James Comey ayaa lagu wadaa in uu dhawaan hortago Guddiyada Baarlamaanka si uu uga hadlo wixii dhex maray isaga iyo Madaxweynaha Donald Trump.
Trump ayaa todobaadkii tagay xilka ka qaaday James Comey kadib markii uu ka diiday Donald Trump codsi ahaa inuu joojiyo baaritaanka FBI-da ku wado xidhiidhka ka dhaxeeya Ruushka iyo Guddigii Trump ee ololihiisa doorashada.
Jariidada New York Times ayaa shaacisay xog ay ka heshay xubno ku dhaw dhaw James Comey oo sheegaya in Mr. Comey uu qoraal ku qoray codsigii uga yimid Trump oo ahayd in uu joojiyo baadhitaanka uu ku waday Gen. Flynn lataliyihii hore ee Trump iyo xidhiidhka uu la lahaa Ruushka.
Qoraalkan Comey ayaa dhaawici kara Madaxweyne Trump maadaama sharciga Maraykanka u yaala uu qorayo in Madaxweynaha uusan faraha lageli karin danbi baadhista, waxayna kamid tahay qodobada xilka looga qaadi karo Madaxweynaha hadii lagu helo in uu jabiyey shuruucda Dastuuriga ah.
Aqalka Cad ee Maraykanka ayaa beeniyey xogtan cusub ee Jariidada New York Times shaacisay. Madaxtooyada Maraykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay dhexda uga jiray fadeexada kale ee ah in Trump sir muhiim ah la wadaagay Ruushka xiisadaasi oo iyaduna weli taagan.